DHEGEYSO-Wadahadal khadka telefanka kudhexmaraya Puntland iyo Galmudug oo burburay. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Wadahadal khadka telefanka kudhexmaraya Puntland iyo Galmudug oo burburay.
Oktoobar 19, 2016 3:30 b 0
Galkacyo, Oct 19 2016–Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland Mudane Cabdirarashiid maxamed xirsi ayaa maata sheegay inay mar kale wada hadal dhanka taleefanka ay la yeesheen wasiiro ka tursan maamulka galmudug.
Wasiirku waxa uu kaloo sheegay in dhanka galmudug wasiirada ka socdaa ay soo jeediyeen qodobo ay ka mid yihiin in xabada la joohiyo in dhismaha suuqa la joojiyo iyo ciidamadana lakala qaado wixii kaloo wada hadal ahna xamar lagu wada hadlo.
Wasiir cabdirashid ayaa sheegay in dhanka puntkand ay wadahadalka udiyaariyeen guurtida gobolka mudug maamuladuna ay fuliyaan wixii maamuladu ku heshiiyaan taasna wasiirada galnudug ay diideen kuna adjeysteen inaysan ciidamada galmudug aysan odayaasha ka amar qaadan.
Arintida kala duwan ee ppuntland iyo galmudug ayaa keentay in wada hadalkii dhanka taleefanka ku dhex maray labada dhinac layku afgaran waayo.
Afgooye oo kusoo laabatay gacanta ciidanka Dowladda Soomaaliya
Dhagayso Barnaamijkii Saakay iyo Dunida Arbaco, Oct, 18, 2016 Wariye Maxamuud Cabdi Ibraahim Studio Daljir Boossaaso